Ikati lami liyagula? - Ziyini izimpawu zokuyithola? | Bezzia
Sihlala sisho ukuthi izilwane ezifuywayo azikwazi ukukhuluma futhi impela sineqiniso. Ngoba ngaphezu kwenkampani abasinikeza yona kanye nempendulo yabo ezenzweni, kubonakala sengathi sibazi kahle. Vele kunesihloko esihlala siphuthelwa ngaso: Ngingazi kanjani ukuthi ikati lami liyagula?
Kwesinye isikhathi siyakwazi ukubona izimpawu ezicacile kepha lokhu akwenzeki ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke siqala ukukhathazeka ngaphezu kwesidingo. Ngakho-ke, namhlanje sikushiya neminye imikhondo ozoqala ngayo usola ukuthi kukhona okwenzekayo Ngakho-ke, udinga ukuya kudokotela wezilwane ngokushesha okukhulu ukuze ususe ngokuphelele ukungabaza kwakho.
1 Izinguquko ku-appetite yakho
2 Izinguquko emaphethini wakho wokuziphatha
3 Ukulala ngaphezu kokujwayelekile
4 Izinwele zakho azinakho ukukhanya okufanayo
5 Izinsini zimhlophe kunepinki
6 Ukukhathala okungazelelwe kungakhombisa ukuthi ikati lami liyagula
Izinguquko ku-appetite yakho
Ngenye yezimpawu ezicacile zokuthi kukhona okwenzekayo. Akudingeki sibeke izandla zethu emakhanda ethu, ngoba mhlawumbe kuyinto yesikhashana nje, kodwa kuyiqiniso ukuthi isivivinyo esisobala. Ngakho-ke, uma sibona ukuthi wehla kanjani emzimbeni futhi kuhambisana nokuhlanza, akukho okunye esingakusho. Vele, kwezinye izikhathi, ushintsho lunikezwa sidle ngaphezu kokujwayelekile kuzo futhi kungenzeka ukuthi sikhuluma ngokugula kwamathumbu noma nesifo sikashukela.
Izinguquko emaphethini wakho wokuziphatha
Njengoba wazi kahle, amakati yizilwane ezijwayele. Banemikhuba yabo futhi kunzima kakhulu ukuba bayiguqule. Ngakho-ke, lapho ubona ukuthi lokhu kuyenzeka nokuthi abaqhubeki nalokhu abekade bekwenza, sekuyisikhathi sokubuza ukuthi ikati lami liyagula yini. Isibonelo, zihlanzekile impela kepha uma ubona ukuthi ayihlanzwa njengakuqala noma mhlawumbe, iya kokunye ukweqisa futhi ukuhlanzwa kwayo kweqile, kuzobe sekuvele kusinikeza umkhondo wokuthi kukhona okwenzekayo.
Mhlawumbe ngalesi sikhathi kunzima ukwazi ukuthi ikati lami liyagula yini, ngoba balala, balala amahora amaningi. Kepha uma ubona ukuthi usachitha isikhathi esiningi kunokujwayelekile amehlo akhe avalekile, uma futhi ubona ukuthi uzama ukucasha noma uvuka engenalutho, kukhona okungahambi kahle. Futhi sisho ushintsho ekuziphatheni kwakhe, ushintsho. Ngakho-ke, kungakuhle ukuthi uzibeke ezandleni zochwepheshe ukuze ubonisane nayo.
Izinwele zakho azinakho ukukhanya okufanayo
Siyathanda ukubona ukuthi izinwele zakhe zikunikeza kanjani lokho kuthinta kokukhanya. Ngoba ifana nempilo nobuhle. Kepha kwesinye isikhathi akunjalo futhi sibona uhlangothi oluhlukile. Lokho wukuthi, sizobona ukuthi ukukhanya okushilo kulahlekile ngaphezu kwalokho kwesinye isikhathi sizokuqaphela ukuthi kuminyene kakhulu. Ngakho-ke, lapho sizoqala ukusola ukuthi kukhona okwenzekayo. Ngakolunye uhlangothi, Yebo, kungahle kuhlobene nesifo esithile, kepha kwesinye kungenzeka kungenxa yokudla. Lokho wukuthi, isilwane sidinga amanani wokudla okunempilo angasenzi.
Izinsini zimhlophe kunepinki
Kuyiqiniso ukuthi izinsini zivame ukuba pinki, okuyiyona ekhomba isimo sempilo esiyisisekelo. Kepha kwesinye isikhathi siyabona ukuthi umbala omhlophe uyavela kubo. Ngakho-ke, kungenye yalezi zimpawu ezicacile zokuthi kukhona isifo esithintekayo kuma-fining ethu. Esinye sazo i-anemia, kepha kuyiqiniso ukuthi kungaba nezinye izizathu ezahlukahlukene kakhulu. Uma kuyi-anemia, kuzophinde futhi kuhambisane nobuthakathaka noma ukukhathala ngaphezu kokuncipha emzimbeni nokuncipha kwesisindo. Ngakho-ke ukuze ususe ukungabaza kuhlale kululeka ukuxhumana nodokotela wezilwane.
Ukukhathala okungazelelwe kungakhombisa ukuthi ikati lami liyagula
Kuyiqiniso ukuthi vele bangaba ngamavila. Kepha uma kukhulunywa ngokudlala, nabo banikela ngakho konke. Ngakho-ke uma ubona ushintsho olukhulu, cishe oluzumayo, kungenzeka ukuthi isexwayisa ngento engemuva kwayo. Uma engafuni ukudlala, uma engenalutho, angaba nenkinga ethile yokuphefumula. Yize singeke sigxile kophawu olulodwa futhi hhayi esiphethweni esisodwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Mascotas » Ngingazi kanjani ukuthi ikati lami liyagula?